सेवा अवधि बढाउन सशस्त्रका ६ डीआईजीको लबिङ, सर्वाेच्चको आदेशमा के छ ? - Dainik Nepal
सेवा अवधि बढाउन सशस्त्रका ६ डीआईजीको लबिङ, सर्वाेच्चको आदेशमा के छ ?
दैनिक नेपाल २०७७ मंसिर ७ गते ६:३९
२०५८ सालमा नेपाली सेनाबाट सेवा परिवर्तन गरी सशस्त्र प्रहरी बलमा आई हाल डीआईजी पदमा कार्यरत ६ र एक जना एसएसपीले तालिम अवधि गणना नगरी सेवा अवधि कायम गर्न माग गर्दै गृह मन्त्रालयमा निवेदन दिएका छन् । सेनामा गरेको तालिम अवधिभरको १८ महिनालाई सेवा अवधिमा गणना नगर्न अनुरोध गर्दै उनीहरूले गृहमा निवेदन दिएका हुन् । सेवा अवधि बढाउन उनीहरूले सशस्त्र मुख्यालयलाई समेत बाइपास गरी सिधै गृह मन्त्रालयमा निवेदन दर्ता गरेको पाइएको छ ।
३० बर्से सेवा अवधि सकिन तीन साता बाँकी रहँदा जागिर लम्ब्याउन गृह मन्त्रालय गुुहार्ने डीआईजीहरूमा नगेन्द्र थापा, कवीन्द्रमान श्रेष्ठ, कृष्णभक्त बम्हाचार्य, हरिशंकर बुढाथोकी, राजेन्द्र बस्नेत र हरिशचन्द्र अधिकारी छन् । यस्तै, एसएसपी राजेन्द्र शाक्यसमेत जागिर लम्ब्याउने प्रयासमा गृह मन्त्रालय पुगेका छन् । २८ मंसिर २०४७ मा सेनामा प्रवेश गरेका उनीहरूको ३० बर्से सेवा अवधि यही २७ मंसिरमा सकिँदै छ ।
यसअघि अवकाशको मुखमा पुगेका बाहिनीपतिलाई प्रधान कार्यालय बोलाएर अन्य डीआईजीलाई बाहिनीपतिको जिम्मेवारी दिइन्थ्यो ।
सशस्त्र प्रहरी बलमा यस प्रकृतिको यो नै पहिलो घटना भने होइन । कोषराज वन्त सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक हुँदा २०७१ सालमा तत्कालीन एआईजी ऋषभदेव भट्टराई र सुशीलकुमार श्रेष्ठले पनि सेवा अवधिको गणना थप माग गर्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए । तर, उनीहरूको ३० बर्से सेवा अवधि सकिन पाँच दिन बाँकी रहँदा तत्कालीन न्यायाधीश गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले सो मुद्दाका बारेमा अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने फैसला गर्दै सेवा अवधिमा तालिम अवधि पनि जोडिने फैसला गरेको थियो ।
सो रिटमाथिको ११ भदौको आदेशमा भनिएको छ, ‘यसमा निवेदकले सेवा प्रवेश गरेपछि भएको सिटरोल फारामको व्यक्तिगत विवरणको क्रमसंख्या १८ मा २०४१/०५/१७ बाट सेवा अवधि गणना हुने भनी उल्लेख गरेका र तत्काल प्रचलित शाही सैनिक नियुक्ति प्रमोसन र अरू विविध व्यवस्था साधारण नियमहरू २०२० को नियम २ को उपनियम (२) मा क्याडेटको नोकरी अवधि तथा ज्येष्ठताको गणना निज तालिममा सरिक भएको मितिदेखि गरिने व्यवस्था भएकामा यी निवेदकहरू २०४१/०५/१७ देखि नै तालिममा सहभागी भई २०४२/१०/११ देखि आयुक्त पद पाएकामा विवाद नरहेकाले निवेदकहरूको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु परेन, कानुनबमोजिम गर्नू ।’
सर्वाेच्चले अन्तरिम आदेश नदिएपछि तत्कालीन एआईजी भट्टराई र श्रेष्ठले १६ भदौ २०७१ बाट ३० बर्से सेवाकाल पूरा गरी अनिवार्य अवकाश पाएका थिए ।
सोही मुद्दामा सर्वाेच्चका तत्कालीन न्यायाधीश रामकुमार प्रसाद शाह र चोलेन्द्रशमशेर जबराको संयुक्त इजलासले २१ पुस २०७१ मा आवश्यक प्रमाण नपुग्ने भन्दै सो मुद्दा तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो ।
सेनाबाट स्थानान्तरण भई सशस्त्रमा आई आईजीपी बनेका सनतकुमार बस्नेत र शैलेन्द्रकुमार श्रेष्ठले पनि ३० बर्से सेवा अवधिकै कारण अवकाश पाएका थिए ।
गृह मन्त्रालयले निवेदक डीआईजी र एसएसपीको निवेदनबमोजिम सेवा अवधि थपे सबै जनाको १८ महिना सेवा अवधि थपिन्छ । तर, यसले सशस्त्र प्रहरी बलमा कार्यरत अधिकांश अधिकृतको वृत्ति विकासमा गम्भीर असर पर्ने देखिन्छ । आगामी डेढ वर्षसम्म माथिल्लो निकायमा बढुवा ठप्पजस्तै हुनेछ । हाल डीआईजीको रोल क्रममा रहेका एसएसपी गणेश ठाडा मगर, कमल गिरी र अभिकुमार खत्रीको बढुवा पनि रोकिनेछ । सिसं १ मा सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भई हाल एसपी रहेकाहरू पनि बढुवामा प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन् ।
सेवा अवधि बढाइ पाऊँ भनी निवेदन दिनेमध्ये सबैभन्दा बढी फाइदा डीआईजी नगेन्द्र थापा र कवीन्द्रमान श्रेष्ठलाई हुने देखिन्छ । किनभने उस्तै परे उनीहरूमध्ये एक जना सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकसमेत बन्न सक्छन् । १८ महिना सेवा अवधि थपिँदा उनीहरूको सेवा अवधि २०७९ जेठसम्म पग्छ । जबकि, वर्तमान आईजीपी शैलेन्द्र खनालले २८ चैत २०७८ मै अनिवार्य अवकाश पाउँछन् । त्यसपछि तीन साता हालका वरिष्ठ एआईजी पुष्पराम केसी २२ दिन आईजीपी बन्नेछन् । त्यसपछि एक महिनाका लागि वरिष्ठताका आधारमा थापा वा श्रेष्ठ आईजीपी बन्छन् । १० असार २०७४ मा डीआईजीमा बढुवा भएकाले उनीहरूलाई पाँच बर्से डीआईजीकालका कारण पनि आईजीपी बन्न साथ दिन्छ ।
उनीहरूको १८ महिने सेवा अवधि थपिँदा हाल डीआईजी र एसएसपीमा कार्यरत कतिपयले सोही पदबाट अनिवार्य अवकाश पाउनेछन् । यसले समग्र सशस्त्र प्रहरी अधिकृतमै नैराश्य छाउने देखिन्छ । राजधानी दैनिकमा राेशन श्रेष्ठले समाचार लेखेका छन् ।
अब टोल–टोलमा कोभिड सहजीकरण समूह